दिशा पटानीको झोलाको साइज देखेर सबै छक्क परे, सोधे- के राखेको छ , पान मसाला ? – Annapurna Post News
अभिनेता टाइगर श्राफको फिल्म ‘हिरोपन्ती २’ हलमा रिलिज भएको छ । यो फिल्म अभिनेताका लागि निकै विशेष छ । उनका फ्यानहरु पनि उनको फिल्मको प्रतिक्षामा थिए । टाइगर श्राफले फिल्म ‘हिरोपन्ती’ बाट फिल्म उद्योगमा डेब्यु गरेका थिए । यो सोही फिल्मको सिक्वेल हो । फिल्ममा नवाजुद्दीन सिद्दीकी र तारा सुतारिया देखिदैछन् ।
बिहीबार राति मुम्बईमा ‘हिरोपन्ती २’ को स्क्रिनिङ भएको थियो । स्क्रिनिङमा बलिउडका धेरै सेलिब्रेटीहरु सहभागी भएका थिए । तीमध्ये एक टाइगर श्राफकी प्रेमिका दिशा पटानी पनि थिइन् । स्क्रिनिङमा आएकी दिशा पटानीको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । ल्याभेन्डर कलरको ड्रेसमा दिशा निकै ग्ल्यामरस देखिए पनि सबैको नजर अभिनेत्रीले हातमा बोकेको सानो झोलामा थियो ।
नायिका अहिले ट्रोलको निशानामा परेकी छिन् । मानिसहरूले उनको झोलाको मजाक उडाएका छन्। एक प्रयोगकर्ताले लेखे,– के छ पर्समा ? पान मसाला पाउच ? अर्को प्रयोगकर्ताले लेखे– यो झोलामा के राखिएको हुनुपर्छ ? तेस्रो प्रयोगकर्ता उनलाई उडाउँदै लेख्छन्– ‘दिशाको हातमा कुन ताला छ भाइ ? दिशा पटनीको यो सानो झोलाको मूल्यको बारेमा कुरा गर्दा रिपोर्टका अनुसार यसको मूल्य ४६ हजार रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
त्यो सानो झोलाको लागि मुल्य धेरै हो। जनता भन्छन्, यति महँगो झोला, त्यो पनि यति महँगो । दिशा पटनीको पोशाकको बारेमा कुरा गर्दा, लेभेन्डर कलरको ड्रेसको तल सिल्भर डिजाइन छ। मिल्दो हाइ हिल अभिनेत्रीले लगाएकी छिन् । कपाल खुला राखेर नग्न मेकअपमा उनी देखिएकी थिईन् ।